ASA TANANA : Hampahafantarina izao tontolo izao fa tsara kalitao ny vokatra eto Madagasikara
Ho fanatsarana ny sehatry ny asa tanana, hanampiana ireo izay misehatra amin’izany dia nanambara ny Minisitry ny Asa tanana sy ny haitao, Sophie Ratsiraka fa azo atao soa aman-tsara ny mitrosa vola amin’ny banky. 3 mai 2022
Hampidirina Cnaps ihany koa ireo mpanao asa tanana. Marihina mantsy fa nisedra olana lehibe ity sehatra iray ity tao Nosy Be nandritra ny fotoana fihibohana vokatry ny fiparitahan’ny covid-19. Niaina tao anatin’ny fijaliana tanteraka ireo mpanao asa tanana nandritra izany. Ho ezaka fanatsarana indray àry manomboka izao dia tsy maintsy halamina sy harindra ny fomba fiasa rehetra mba ho fanomezan-danja indray ireo entana vita Malagasy. Manomboka misokatra tsikelikely rahateo koa ny sisin-tany sy ny fitsidihan’ny mpizaha tany, ka tsara raha tratrarina ny fampafahantarana izao tontolo izao fa tsara kalitao ny vokatra eto Madagasikara.
Fanampiana ireo mpisehatra amin’ny asa tanana
Raha nihaona tamin’ireo mpisehatra amin’ny asa tanana tao Nosy Be ny Minisitra ny Asa tanana sy ny haitao dia nambarany fa “azon’ireo mpanao asa tanana eto Madagasikara ny mindram-bola amin’ny Banky amin’ny tahany 09%, hisitraka ny karatra maha mpanao asa tanana avy izy ireo, ho tafiditra Cnaps ihany koa izay mety hahazoana fisotroan-dronono sy volan-jaza ary vola raha misy ny loza amperin’asa. Manomboka izao dia atao “impots synthétique” no aloan’ireo mpanao asa tanana ary fanomezana fiofanana amin’ny fenitra ambony sy kalitao fa indrindra ny fiarovana ireo asa vita Malagasy. Raha ny sehatry ny fizahantany manokana, misongadina tanteraka i Nosy be, Faritra Diana manan-karena sy manan-talenta ary tsy misy harena tsy hita ao an-toerana na ambanin’ny tany na ambonin’ny tany na an-dranomasina.
Ny ezaka tokony hatao manomboka eto kosa dia hatsaraina ny fomba fitrandrahana sy tosika ary fanohanana no tsy ampy ka mila fifanomezan-tanana amin’ny rehetra mba hanampiana ireto mpanao asa tanana ka hampiroborobo ny toekarena ao Nosy Be. Raha mandroso ny asa tanana, hoy Ramatoa Minisitra, dia mandroso ny Faritra Diana. Efa eo an-dalam-piresahana amin’ny Omapi koa ny Minisiteran’ny Asa tanana sy ny haitao mba hamoahana lalàna natao hiarovana ny asa tanana malagasy amin’ny alalan’ny didim-panjakana.
Harenina ny fahavaozana efa an-taonany
Nandritra ny fidinana ifotony nataon-dRamatoa Minisitra tany an-toerana moa dia nisy ny dinidinika, ny fifampiresahana sy fitadiavana vahaolana maharitra izay noresahina mivantana tamin’ireo mpanao asa tanana izay anisany nisedra ny mafy taorian’ny fandalovan’ny aretina covid-19 iny. Tsy maintsy hatomboka ny dingana any amin’ny fanatsarana ; ezahina amin’ity taona ity ny fanatratrarana ireo tanjona rehetra ho fanarenana ny fahavoazana nisesisesy nandritra ny fandalovan’ity aretina ity maneran-tany izay mbola tsy resy hatramin’izao.